Saciid Cali Axmed
Arimahaas ka sokow waxa jira qaladaad kale oo uu ku dhici karo qofka e-mailka dirayaa, kuwaas oo keeni kara in ay ka fakadaan macluumaad aanu jeclayn in ay dibada uga baxaan. Arimahaas waxaa ka mida:
1) In aad qorto e-mail aad qof waxa uga sheegayso (inkasta oo aanay akhlaaqiyan iyo diin ahaan sax ahayn hadana waa ay dhacdaa) dabadeedna aad qofkii laftigiisii aad si qalad ah ugu dirto amaba qof kale oo aad u diratay uu qofkii aad wax ka sheegtay uu u diro (waxa laga yaabaa in aad is tiraa ma dhici karto laakiin dhacdooyin badan oo noocana ayaa la hayaa.
2) In aad ka tirsan tahay e-mail kooxeed (mailing list) dabadeena aadoo doonaya in aaad fariin u dirto qof ka mida e-mail kooxeeedka aad fariintaadii u dirto kooxda oo dhan. Halkaas oo laga yaabo in macluumaad aad doonaysay in uu qof kaliyi akhristo aad si khalad ah ugu gudbiso kooxda dhan (Hadii aad xubin ka tahay e-mail kooxeed aanad doonayso in aad fariin u drto qof ka tirsan e-mail kooxeedkaa iska ilaali in aad isticmaasho “Reply”).
1) Isku day in aad wax ka fahanto qaabka uu u shaqeeyo nidaamka e-mailka aad isticmaalasaa. Hadii aad e-mailka shaqada ama iskuulka isticmaalayso iska hubi inta qof ee e-mailkaaga akhrin karta.
2) Caqligaaga isticmaal. Ha ku dirin e-mailka arimo shakhsiya sida xisaabta bangigaaga, kiridhid kaarkaaga, meesha aad degenthay iwm.
3) Tirtir e-mailka ka dib marka aad akhrido. Hadii aad e-mailkaaga ka tiriri karto kombuyiitratda shirkada aad xisaabta (e-mail account) ka furatay sidaa yeel. Shirkadaha qaar ayaa kuu ogol in aad samayn karto sidaas. Hadii laguu ogolyahay ka faa’idayso.
4) Xisaab khaas ah u furo wax yaabaha shakhsiga ah. Talo ahaan isticmaal e-mailka ay ku siyaan shirkada aad ka internetka ka kiraysato.